Ciidamada Dowlada Oo Caawa Lagu Weeraray Magaalada Muqdisho -
HomeWararkaCiidamada Dowlada Oo Caawa Lagu Weeraray Magaalada Muqdisho
Ciidamada Dowlada Oo Caawa Lagu Weeraray Magaalada Muqdisho
Wararka Laga Helaayo Agagaarka Warshadda Caanaha ee Magaalada Muqdisho Ayaa Sheegaya In Ciidamo ka tirsan Millitariga Soomaaliya ayaa caawa waxaa lagu weeraray halkaasi.
Rag hubeysan ayaa Ciidamadan oo halkaasi marayay waxa ay ku rideen qoriga 7-ka, kaasi oo si weyn looga maqlay xaafadaha ku hareereysan Warshadda Caanaha, sida ay sheegeen dadka degaanka.
Ciidamada Millitariga ee la weeraray ayaa intaasi kadib waxa ay rideen rasaas fara badan oo ay uga jawaabeen ragga soo weeraray Kuwaas Oo loo maleynayo in ay ka tirsan yihiin ururka Al-shabaab, Hase Ahaatee Sida Lagu Yaqinay Way Ka Baxsadeen goobta uu Weerarka Ka Dhacay.
Si dhab ah looma Weerarkaasi Qasaaraha uu Geeystay Dhimasho Iyo Dhaawac maadaama xilli habeen ah ay tahay, xaqiiqada jirtana aanan la ogaan karin.
“ Marqura ayaan maqalnay jug xoogan, kadib rasaas ayaa xigtay, waxayna jugtan ka dhacday Warashadda Caanaha, waxaana Qoriga 7-ka lagu tuuray Ciidamo mararay wadada, caawa howlgal ayaa ka socda xaafada.” Ayay Sheegeen Dadka degaanka”
Dhinaca kale Saraakiisha Ciidanka Millitariga weli kama aanay hadlin weerarkan caawa dhacay, bale wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada ay wadaan baaritaano amni xaqiijin ah, oo lagu raadinayo raggii falkan ka dambeeyay.
Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa maalmahan u muuqda mid faraha ka sii baxaya, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay kulan ammaanka looga hadlayay la qaatay Gudoomiyeyaasha degmooyinka ayaa wuxuu u sheegay in shaqada uu weynayo Guddoomiyihii wax ka qaban waaya falalka amniga ka baxsan ee ka dhaca degmadiisa.